UMboniso weSibini waseTshayina – weAfrika wezoQoqosho noRhwebo kunye neNtlanganiso yokuKhuthaza yoMmandla weNtsebenziswano yobunzulu boQoqosho noRhwebo yaseChina-Afrika (Yiwu) Ngomhla wama-25 kuCanzibe, ngo-2021 ummeli wenkampani yetyuwa kwihotele yiwu shangri-la iileya ezintathu zeholo ebibambe iTshayina yesi-2. -IAfrika kwezoqoqosho kunye norhwebo...
I-Energy Bureau yakhupha uxwebhu
IKomishoni yoPhuhliso kunye noHlaziyo lweSizwe, i-Bureau of Energy ikhuphe uxwebhu: ukuvumela umoya, iiprojekthi ezixhasa ukukhanya ukuba zakhiwe ngamashishini okuvelisa umbane NgoJulayi 5, iKomishoni yoPhuhliso kunye noHlengahlengiso lweSizwe kunye noLawulo lweSizwe lwezaMandla ngokudibeneyo bakhuphe iSaziso ngeMatte. .
Ingxelo yeXabiso loBonelelo kwiShishini lePhotovoltaic (5 kaJulayi 2021)
Ngokwekowuteshini ye-EnergyTrend ngoJuni 30, 2021, ixabiso lezinto eziphathekayo ze-polycrystalline zeveki enye yi-RMB108/KG; Ixabiso le-crystal material enye yi-RMB210 / KG. Ixabiso le-polysilicon ye-RMB engekho yaseChina yayiyi-US $ 28.767 / KG, phantsi kwe-3.3%. Ixabiso le-polycrystalline silicon wafer yayiyi-RMB2.43/Pc,...